အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး | Page 10 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
8.6.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
မိတ်ကပ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ မျက်နှာမှာလိမ်းကျံထားတဲ့ အရေပြားထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ ခရင်မ်၊ လိုးရှင်းစတာတွေဟာ တနေ့တာလုံးလှုပ်ရှားသွားလာနေစဉ်အတောအတွင်း...
ဒူး၊ တံတောင်တွေ ဖြူဝင်းလာအောင်
3.6.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
ဒီတစ်ပတ် စနေနေ့မှာတော့ Beauty Blogger #phyodaybyday...
29.5.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
1. ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးပါ
အမွှေးရိတ်တဲ့အချိန်မှာ အရေပြားမျက်နှာပြင်ဟာ ဆဲလ်သေတွေကြောင့် ကြမ်းတမ်းနေပါက ဘရိ...
မျက်နှာအသားအရေ အေးမြစေဖို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
27.5.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
Dr Myanmar ပရိသတ်တွေအတွက် Beauty Blogger #p...
သကြားနဲ့ ဦးရေပြားယားယံတာကို ဖြေရှင်းမယ်
20.5.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
ဦးရေပြားယားယံခြောက်သွေ့နေပါက ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲကို သကြားလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းထည့်၍ လက်ချောင်းထိပ်များဖြင့် ဦးရေပြားကို ညင်သာစွာ နှိပ်နယ...
17.5.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
1. တစ်နေ့လျှင် အစာနည်းနည်းချင်းစီကို 5-6 ကြိမ်ခွဲစားပါ။
တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်အရေအတွက်များများစားပေးခြင်းကြောင့် ကယ်လိုရီကိုပုံမှန်လောင...
သရက်သီး၊ သခွားသီးနှင့် ဟင်းနုနွယ် ဖျော်ရည်
23.4.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
ဈေးသက်သာ၍ လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အိမ်လုပ်ဖျော်ရည်တစ်မျိုးကတော့ သရက်သီး၊ သခွားသီးနဲ့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်တို့ကိုပေါင်းစပ်ပြ...
13.4.2017 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
1. အန္တရာယ်ရှိသောအချက်များကို လျစ်လျှူရှူထားခြင်း
သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ သွေးတွင်းအဆီဓာတ်များခြင်း စတာတွေကိုမသိဘူးဆိုရ...